LA CHARITE DE MADAGASCAR : Nizara arotava sy « gel désinfectant » ho an’ny ankizy sy ny mpitandro filaminana - Journal Madagascar
Fanamarihana ny fetim-pirenena. Mipetraka ho tantara ho an’ny « Association La Charité de Madagascar » ny datin’ny 26 jona 2020. Fizarana arotava sy « gel désinfectant » no nanamarihan’ny fikambanana ny fankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Ankizy sahirana miisa 200, monina eny amin’ny fokontany Andranomena sy mpitandro filaminana niasa tamin’io andro io, teny amin’ny lalana mankany Ambatofotsy, Mahitsy ary 67 Ha no nisitraka izany. « Avy amin’ny Filoha Tale Jeneralin’ny SOMAPRO, Al-Hajj Haniphe Jivan ireo fanomezana ireo ary misaotra azy satria tsy resaka ara-barotra ihany no ataony fa nanokana fanampiana ho an’ny mpiara-belona ihany koa izy », hoy i Zouber Assenjee, Filohan’ny fikambanana. Nambarany fa anisany ahafantarana ny SOMAPRO ny marika Impec izay ahitana karazana kojakoja ilaina amin’ny fahadiovana. Ankoatr’izay dia nanolotra vatomamy sy « biscuit » ho an’ireo ankizy ihany koa ny fikambanana tamin’io fotoana io.
Sakafo ho an’ny ankizy
Mbola ao anatin’izay fanamarihana ny fetim-pirenena izay dia nizara sakafo atoandro ho an’ireo ankizy sahirana eny amin’ny fokontany Andranomena sy ny manodidina ny « Association La Charité de Madagascar », ny 27 jona 2020. « Isaorana manokana i Firoz Ismaël Patel, malala-tanana avy atsy La Réunion, nanampy tamin’ny fanatontosana ity fizarana sakafo ity. Tsy adino ihany koa ny misaotra ny solontenan’ny Association La Charité atsy La Réunion, Salim Akbar Aly », hoy ny filohan’ny fikambanana eto Madagasikara.
La Charité de Madagascar lance un appel d'aide à tous les bienfaiteurs